The Dash by Bragi, mihoatra ny finday tsy misy tariby | Vaovao IPhone
The Dash by Bragi, mihoatra ny finday tsy misy tariby
Luis Padilla | | Fitaovana IPhone, iPhone 7
Vao nanomboka ny ady ho an'ny headphones tsy misy tariby "tena izy", ary misy mpifaninana iray izay efa teo amin'ny kianjan'ny ady nandritra ny fotoana elaela, nefa izao dia nahasarika bebe kokoa ny fanapahan-kevitr'i Apple hatao raha tsy misy ny Jack of headphones ary ny fandefasana an'ny AirPods. Ny Dash dia tena headphones tsy misy tariby, toy ny AirPods, tsy misy karazana tariby mampifandray azy ireo, fa Tsy toy ny AirPods izy ireo fa mihoatra ny andraikitra tsotra amin'ny fihainoana mozika, satria mpanara-maso ny hetsika ara-batana izy ireo izay ahafahanao mifehy ny fitepon'ny fony sy ny dia lavitra halehanao. tsy mila manao brasele miisa na toy izany. Ireo no headphones mandroso indrindra amin'izao fotoana izao, ary afaka nanandramana azy ireo izahay hanombanana raha toa ka mahavita ny zavatra ampanantenainy.
1 Volavola sy ergonomika
2 Fahaleovan-tena hatramin'ny 3 ora
3 Fanamboarana sy fiasa
4 Kalitaon'ny feo sy ny elanelany
5 Fanaraha-maso ny hetsika ara-batana
Volavola sy ergonomika
Tsy toy ny AirPods, The Dash dia manana endrika tsy manam-paharoa ary apetraka amin'ny sofina tsirairay ny earbuds ary tsy dia misy dikany izany. Rehefa midina an-dalambe miaraka amin'izy ireo ianao, ny ankamaroany dia tsy hahatsapa fa manao zavatra any an-tsofinao ianao, izay ho an'ny maro no zava-dehibe. Na dia toa lehibe aza ny haben'ny azy ireo, dia zara raha mivoaka amin'ny sofina izy ireo, ary tsy misy tahotra azy ireo hianjera amin'ny tany., satria raikitra tsara izy ireo ary na dia manao fanatanjahan-tena aza ianao dia tsy mihetsika mihitsy. Azoko natao ny nanamarina azy tamin'ny alàlan'ny fihazakazahana, ary nanery fihetsika mihitsy aza hahitana raha niafara tamin'ny tany izy ireo, saingy tsy nisy milimetatra nesorina. Mazava ho azy, tena zava-dehibe ny fampiasana pad mety aminao, ary ao anatin'izany dia misy habe efatra mifanaraka amin'ny sofina rehetra.
Mora tokoa ny mametraka azy ireo, amin'ny hetsika roa monja dia tafiditra ao anaty sofinao tanteraka izy ireo, ary tena mahazo aina izy ireo, nefa tsy miafara amin'ny antony mahatonga anao mahazo aina na dia mitafy azy ireo mandritra ny ora maro aza. Amin'ny fotoana tsy misy, dia misy fahatsapana fa mavesatra na tsy mahazo aina izy ireo. Ny fonon-tsofina dia vita miaraka amina fitoeran'entana izay miasa ho toy ny foibe famahanana ary bateria ivelany hamerenana azy ireo raha tsy ampiasainao.. Ny haben'ny boaty fitaterana dia somary lehibe kokoa noho ny sigara fonosana iray, ary azo entina am-paosy tsy hatahorana hanimba azy ireo satria metaly ny fonony, manome solidity ny set ary miaro azy amin'ny mety ho kapoka.
Fahaleovan-tena hatramin'ny 3 ora
Amin'ity karazana kojakoja ity, ny fahaleovan-tena no fahasembanana lehibe indrindra, ary raha ampiantsika amin'izany fa miresaka fitaovana iray misy fihenam-bidy sy fitempon'ny fo isika, dia mety ho nampidi-doza ny vokatr'izany. Ny Dash dia maharitra adiny telo miaraka amin'ny fiampangana feno, izay mety ho toa tsy dia fahita firy, saingy raha heverinay fa mamela hatramin'ny fiampangana 5 feno ny tranga misy azy, dia hahena ny olana raha tsy mpampiasa be fatratra ianao izay mampiasa headphone amin'ity karazana ity bebe kokoa mihoatra ny 3 ora mahitsy. Tsy afaka nanamarina manokana aho raha tanteraka tokoa ireo tarehimarika nampanantenain'ny The Dash, fa Azoko atao ny manamarina fa maharitra mandritra ny adiny roa mahery ny headphones, ary afaka niahiahy momba ny famerenana indray ny cas de charger aho nandritra ny herinandro.
Ny headphones dia tsy mampiseho ny batteriny eo an-tampon-kavoana amin'ny efijery iPhone-nao, zavatra izay ataon'ny headphone Bluetooth hafa, saingy tsy olana goavana io satria azonao atao ny mahita ny bateria sisa tavela mampiasa ny LED ampidiriny. Rehefa mihifikifi-doha ianao dia mihodina ary ny lokony dia miankina amin'ny haavon'ny charge:
Maitso: mandoa mihoatra ny 50%
Mena: sarany efa ho lany
Ny caster charger dia misy LED ihany koa izay manazava ihany rehefa apetrakao ao anaty ny headphone, izay manondro ny fiampangana anao. Rehefa maitso ny LED dia aza manahy fa mbola manana famerenana ampy izy io, fa raha manomboka mena ny LED dia ampifandraiso amin'ny USB amin'ny solosainanao amin'ny tariby izay ampidiriny hamerenana azy io indray ary afaka manohy mankafy ny The Dash tsy misy tahotra ny famoahana ny baterinao. Tena mampahazo aina ny mamoaka ny écouteur amin'ny boatin'izy ireo amin'ny fahafantarana fa feno vola izy ireo ary afaka ampiasaintsika izy ireo tsy misy olana, ary lazain'ny olona iray izay efa nampiasa headphone Bluetooth nandritra ny taona maro ary efa imbetsaka nefa tsy afaka nihaino mozika satria nakarina.
Ny fametrahana ny headphones amin'ny charger dia tsotra, ary tsy misy tahotra fa noho ny hetsika mandritra ny diantsika dia hihetsika izy ireo ary hijanona tsy handoa vola intsony, satria mety tsara izy ireo noho ny andriamby izay manamboatra azy ireo amin'ny toerana mety. Raha hametrahana tratra dia lazao fa ny mpampitohy ampiasaina ao anaty microUSB, noho izany dia tsy maintsy maka tariby manokana amin'ny diantsika isika ankoatry ny Tselatra ho an'ny iPhone.
Fanamboarana sy fiasa
Ny headphones dia mifandray toy ny headset tsy misy tariby, mampifandray azy ireo amin'ny menio Settings amin'ny iPhone. Apetraho eo amin'ny sofinao ny sofina havanana, kitiho mandritra ny segondra vitsy ny faritra mikasika ary rehefa asehon'ny iPhone anao ao amin'ny menio fikirakirana Bluetooth dia safidio izy roa. Azonao atao izao ny mampiasa azy ireo ho toy ny headphones mahazatra. Na dia izany aza raha hampiasa azy ireo ho toy ny qualitement activite activite dia mila atao rohy hafa, amin'ity indray mandeha ity dia mampiasa ny earphone ankavia sy ny fampiharana Bragi manokana. Etsy an-danin'izany, ireo torolàlana momba ny feo omen'ny headphones anao dia azo alamina miaraka amin'ny rindranasa Mac sy Windows ho amin'ny teny Espaniôla, zavatra tena ankasitrahana.
Ity no mamintina ny asa rehetra sy ny fitantanana ny Dash: ny earphone ankavanana dia ilay miandraikitra ny mozika, ny ankavia iray amin'ny fampihetseham-batana. Ny fahafantarana ireo toerana roa ireo ny ambiny dia mihoatra ny "nonoina" na dia toa sarotra aza izany amin'ny voalohany:
Kitika iray hanombohana / hiatoana playback
Fikitika roa hampandroso ny hira,
Tazomy mandritra ny segondra vitsy mba hampifangaroana ny headset amin'ny fitaovanao.
Swipe mandroso na mihemotra mba hampitomboana na hampihenana ny habetsahana
Kitiho ary tazomy raha te hampifandray amin'ny rindranasa sy hanarahana hetsika ara-batana
Tsindrio raha hanomboka hetsika ara-batana
Swipe mandroso hanombohana ny fiasa «Mangarahara» (hazavaiko aoriana kely)
Alefaso mandroso hanombohana fiasa Windshield (aoriana)
Ho fanampin'ireny fihetsika ireny dia azontsika atao ny mampiasa ny fihetsiky ny loha hahafahana mandray antso, manamafy amin'ny lohany, na mandà azy ireo, tsy mihozongozona ny loha. Raha mampiasa ny mpilalao anaty (ny Dash dia mamela antsika hitahiry mozika hatramin'ny 4GB) miaraka amin'ireto fihetsika ireto ihany dia azontsika lavina ilay hira izay manomboka milalao ary miroso amin'ny manaraka. Aorian'ny fanavaozana farany farany dia afaka manao fihetsika hafa hiantsoana an'i Siri ihany koa isika: kitiho ny takolakao ankavanana, eo akaikin'ny sofina, ary afaka miresaka mivantana amin'i Siri ianao amin'ny fitendrena ny lisitry ny mozika tianao.
Kalitaon'ny feo sy ny elanelany
Raha te hanana headphone kalitao feo tsara indrindra ianao amin'ny € 300, dia azo antoka fa tsy safidinao ny The Dash. Saingy tsy midika izany fa ratsy ny kalitaon'ny feo, lavitra azy. Nampitahako mivantana tamin'izy ireo tamin'ny Lightning EarPods sy ny iPhone 7 Plus aho, ary ny marina dia tsy hitako izay fahasamihafana miavaka eo amin'ny lafiny kalitao. Tsara ny feo, ary miaraka amin'ny herin'ny hery ihany koa. Ny mpampiasa voalohany dia nitaraina fa ambany loatra ny volanao, saingy amin'ny fanavaozana dia namboarina izy io ary ankehitriny afaka mihoatra ny fetra fiarovana ianao napetrak'i The Dash, na dia mampitandrina anao aza izy io. Momba ny fampiasana azy io ho tsy an-tanana, raha ataonao amin'ny tontolo mangina izany dia tsy hanana olana ianao raha maheno anao tsara ny mpiresaka hafa, fa amin'ny tontolo be tabataba, lasa sarotra ny mitazona ny resaka indraindray.
Olana iray hafa amin'ireo headphones ireo izay nahatonga azy ireo hanana naoty ratsy tamin'ny fandefasana azy ireo dia ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny fifandraisana Bluetooth. Nihatsara ihany koa izy tamin'ny fanavaozana, ary milamina ny fifandraisana, na dia voafetra ihany aza ny elanelam-potoana, kely noho ny headset bluetooth hafa nampiasako. Raha mbola miaraka aminao ny iPhone-nao, ao am-paosin'ny pataloha, ao anaty kitapo na any anaty kitapom-batsy dia tsy hanana olana ianao, fa aza ampiasaina hivezivezy ao an-trano raha tsy mitondra ny iPhone satria tsy ho azonao izany. Mazava ho azy, any amin'ny toerana misy olona marobe miangona amin'ny fitaovana elektronika maro dia lasa tsy milamina kokoa ny fifandraisana.
Talohan'ny niresahako momba ny fiasa roa ary izao no fotoana hanazavana azy ireo. Ny Dash dia misisika tsara avy any ivelany, noho ny fisian'ireo pads mifanentana amin'ny lakan-tsofina, saingy mety ho olana izany rehefa manao fanatanjahan-tena eny an-dalambe, ohatra. Mba hisorohana an'io olana io dia azonao atao ny mampavitrika ny safidy Transparency, mampihetsiketsika ny earphone havia miverina mankany aloha, ary ny mikrô amin'ny fonon-tsofina dia ho tompon'andraikitra amin'ny fampitana ny feo amin'ny alàlan'ny earphone mankany amin'ny sofinao amin'izay ianao tsy atokana ivelan'ny ivelany. Ity antsasa-potoana ity dia misasaka ihany ankehitriny, ary na dia manatsara ny fandraisana ny feo avy any ivelany aza izy io, dia manome ny fahatsapana fa mbola mila hatsaraina. Ny safidy Windshield izay ampandehanana amin'ny famerenana ny fihetsika teo aloha dia manakana ny rivotra tsy hitabataba sy mamindra amin'ny fiasan'ny Transparency.
Fanaraha-maso ny hetsika ara-batana
Ny Dash dia manana accelerometer, gyroscope ary sensor amin'ny tahan'ny fo, sensor izay mamela anao hanara-maso ny asanao ara-batana amin'ny alàlan'ny fampiharana Bragi. Satria mifanaraka amin'ny rindranasan'ny iOS Health koa izy io dia hafindra any amin'ny iPhone-nao. Ny Dash dia manana programa fanaraha-maso telo:
Mihazakazaka: elanelana, kaloria, tahan'ny fo, dingana, faharetana.
Bisikileta: ny tahan'ny fo, ny faharetany ary ny cadence
Milomano: tahan'ny fo, fisefoana, faharetana ary halavirana
Ny sensor ny tahan'ny fo dia somary tery ihany, ary ny data dia tsy dia samy hafa be loatra amin'izay azony tamin'ny Apple Watch, toy ny halaviran'ny dia lavitra. Ny antontam-baovao azo dia mety tsy ampy ho an'ireo izay te-hanana fifehezana feno ny asany ara-batana, fa ho an'ny mpankafy dia mihoatra noho ny ampy izany ary tsy mila mitondra pulse quantizer ianao na Apple Watch.
Manamafy ny tenako amin'izay efa nolazaiko teo aloha aho: tsy ny écouteur misy kalitao feo tsara indrindra azon'izy ireo omena anao amin'izany vidiny izany, fa rehefa avy nanazava ny zavatra rehetra arosony dia mieritreritra aho fa tsy diso aho raha milaza izany. Ireo no headphones mandroso indrindra azonao vidina dieny izao, farafaharatsiny ao anatin'io elanelam-bidiny io. Fantany tsara fa ny kalitaon'ny feo dia tsara fa tsy tsara, ary manana ny fetrany izy ireo amin'ny halalàn'ny fifandraisany Bluetooth, ny ambiny endri-javatra dia mampiavaka azy ireo amin'ny headset hafa eny an-tsena, eny fa na dia ny AirPods andrasana aza.
Ny fahaleovan-tenany mandritra ny 3 ora, miaraka amin'ny charger cover izay mampiditra, ny fifehezana amin'ny alàlan'ny fihetsika sy ny fihetsiky ny loha, ny fahamoran'izy ireo mampifandray sy mampifandray amin'ny iPhone amin'ny alàlan'ny fametrahana sy fanalana azy ireo eo amin'ny sofinao, ary ireo safidy fanaraha-maso ny hetsika ara-batana.Ireo no toetra mampiavaka azy ireo sy mendrika an'io vidiny "premium" tokony haloao io mba hanananao izay saika hatolotry ny rehetra afaka fotoana fohy. Azonao atao ny mividy azy ireo Amazon amin'ny € 299.
Ny Dash nataon'i Bragi
Famaranana sy fitaovana tsara
Tsy lavo amin'ny fampihetseham-batana izy ireo
Fanoherana ny rano sy ny hatsembohana
fifehezana ny tahan'ny fo, ny halavirana, ny faharetan'ny hetsika sns.
Fanaraha-maso amin'ny fihetsika sy fihetsika mikasika
Raharaha charger izay manome azy ireo fizakan-tena lehibe
Malina ary mahazo aina
4GB fitehirizana anatiny hihainoana mozika ivelan'ny Internet
Faritra fifandraisana voafetra
Mikrô ho an'ny tanana tsy misy tanana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » The Dash by Bragi, mihoatra ny finday tsy misy tariby
Ireo headphone ireo dia toa nahaliana ahy tokoa nandritra ny fotoana nanombohana azy ireo noho ny toetrany (mihoatra ny an'i Apple aza), indrisy fa tsy nalefa tany amin'ny fireneko ...
Eduardo Martinez dia hoy izy:
Famerenana tsara, fanontaniana iray fotsiny rehefa manoratra hoe: "Raha mbola mandeha miaraka aminao ny iPhone, ao am-paosinao, kitapo na kitapom-bolanao dia tsy hanana olana ianao." Tena tsy hisy ny olana? Satria io no hany antony tsy nividianany ireo fakan-tsarimihetsika ireo satria maro no mitaraina momba ny fifandraisan'izy ireo, izaho manokana dia tsy mampaninona ahy ny manana ny iPhone sy headphone miaraka amiko mandrakariva, misaotra sy arahaba avy any Tampa bay Florida 🙂
Valiny tamin'i Eduardo Martinez
Zavatra nitarainan'izy ireo tamin'ny fanombohana izany, saingy tamin'ny kinova 2.2 dia nohamafisin'izy ireo tamin'ny fomba maro. Tsy nanana olana aho raha niaraka tamiko ny iPhone, afa-tsy amin'ny toerana misy olona maro sy fanelingelenana fitaovana marobe, izay misy fanapahana kely.
Arturo Moreno dia hoy izy:
Azonao atao ny milaza amiko ny fomba ataoko mba hamenoana mozika amin'ny finday fa tsy hampiasa bluetooth.
Valiny tamin'i Arturo Moreno
Amin'ny alàlan'ny fampiharana ho an'ny iOS
Apple nanampy pikantsary vaovao 21 ho an'ny Apple TV andiany faha-4